ठूलो पर्दाका ठुल्दाई - Lumbini Times
586 views | रामजी ज्ञवाली | बुधबार, १ पुस ।
नेपाली चलचित्र मन्दिरमा पस्दापस्दै खोजीने नाम हो राजेश हमाल । ठुलो पर्दा होस् वा सानो पर्दा, चलचित्र पारखी र कलाप्रेमीको मन र मस्तिष्कमा सधै जिवन्त रहने नाम हो महानायक हमाल । हमालको सफलताले नेपाली चलचित्रले छोटो समयमा पृथक पहिचान वनाउन सकेको छ । यतिवेला नेपाली चलचित्र जगत अग्रज तिनै महानायक राजेश हमालको पथमा लम्कीरहेको छ ।
नेपाली चलचित्र जगतलाई व्यवसायीक वनाउने र सम्पुर्ण कलाकारका लागी सम्मान जनक पेशा वनाउने काममा हमालले खेलेको भुमिका अनुकरणिय छ । यद्यपी चलचित्र क्षेत्रमा आफुले जन्माएका चेला हमालका लागी चुनौती वनिरहेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा सफलताको सिखर चुमेर एउटा विश्राम लिने अवस्थामा पनि आफ्नै चेलाको चुनौती सामना गर्दै वलिउड स्टार अमिताभको जस्तै चलचित्र महागुरु वन्नैपर्ने वाध्यतामा छन् महानायक हमाल ।
साच्चीकै भन्नेहो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्र हमालकै पदचिन्नमा अगाडी वढिरहेको छ । चलचित्रै क्षेत्रमा रजत महोत्सव सम्म पुगिसकेका राजेश हमालको भुमिकाले आज नेपालीहरुले गर्व गर्न सक्ने भएका छन् । चलचित्रमा अभिनयका हिसावले भनौं, विभीन्न मेलामहोत्सवमा भनौं, विभीन्न समाजीक कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका कुरा गरौं । हमालको चर्चापरिचर्चा अलिकति वढिनै हुने गरेका पाईन्छ अरु कलाकारको तुलनामा । अझ यो पनि भन्न सकिन्छ, नेपाली कलाकारहरुको जमातमा विवादमुक्त कलाकार हमालनै हुन । त्यही भएरनै होला राजेश हमालको नामको अगाडी महानायक जस्तो उच्च श्रेणीको गरिमामय सम्मान थपिएको ।
हमालको कमब्याक गराउने भनिएको ‘वागमती’ चलचित्र रिलीज हुन अव डेढ महिना पनि वाकी छैन । केही कार्यक्रमहरुमा अमेरीकामा पुगेका महानायक हमाल भ्रखरै मात्रै घर फर्किएका छन् र लगत्तै चलचित्रको प्रमोशनतिर पनि देखिएका छन् । नेपालको चलचित्र ईतिहासमा बहुप्रतिक्षित रुपमा हेरिएको वागमति चलचित्र वहुप्रतिक्षीत मात्रै हैन महानायक हमालको करिअरसँग पनि जोडिएको छ । अव चलचित्र हिट वनाउने, चलचित्र सफल वनाउने मात्रै हैन आफ्नो स्टारडम कसरी उहि स्थानमा राख्ने र अझ आफ्नो माहोल नेपाली चलचित्र वजारमा पुन स्थापित गर्ने लगायतका चुनौतीहरु पनि महानायक हमाल समक्ष छन् ।
साउथ शैलीमा निर्माण गरिएको ‘वागमति’ नेपाली बजेटमा बनेको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महंगो नेपाली फिल्म पनि भनिएको छ । ट्रेलरले राम्रो चर्चा पाईसकेको वागमतिमा अभिनीत हमालको अभिनयलाई दर्शकहरुले रुचाईसकेका छन् । तर अव वाकी हमालको वागमति भुमिका हेर्न मात्रै छ । चलचत्रि रिलीज भैसकेपछि चलचित्रभित्रको अन्तिम दृश्य हेरिसकेपछि हमालको पुन मुल्यांकन गर्न दर्शकहरु लाग्नेछन् ।
ट्रि इन्टरटेन्टमेन्टको ब्यानरमा दिनेश दर्शनधारी र बिजय सत्यालले निर्माण गरेको चलचित्रलाई दक्षिण भारतीय नागरिक सन्नी केरलाले हमाललाई जर्वजस्त कमव्याक गराउने प्रयास गरेका छन् र महानायक हमाल पनि निकै मिहेनत गरेर अभिनय गरेका छन् । केरलाको खुवी र महानायकको मिहेनत कसरी देखिनेहो त्यो पनि चलचित्र रिलीज भएकै दिन मुल्यांकन गर्न सकिएला ।
त्यो पुरानो क्रेज, अनि यो क्रेज
राजेश हमालले खेलेको उतिवेलाका चलचित्र ‘भाउजु’ हेर्दा ७५ वर्षिय हजुरआमा रोएको क्षण अझै सम्झनामा ताजै छ । त्यतिवेला हामी नावालक भएपनि हजुरआमाको कोमल मन भित्रै पसेर हमालल आसुँ झराउन सके, उनको अभिनय र उनी अभिनीत उक्त चलचित्रले हामीलाई पनी कता–कता छोएको महसुस भयो । १४ ईन्चको टेलिभीजनमा लगाईएको त्यो फिल्म हेर्न गाउँका झण्डै १५ जना जति उपस्थित थिए । गाउघरे सानो कोठामा नअटाएपनि ढोका खोलेर कोही वाहिर, कोही भित्र, कोही खाँटमा वसेर हेरेको सँम्झनालाई पछिल्ला वर्षहरुमा हमालको चलचित्रमा देखिएको अभिनयसँग दाँज्नेहो भने केही वढि भिन्नता देख्न सकिन्छ । यतिवेला हमालको क्रेज न्युन भएको भन्ने हैन तर त्यतिवेलाको जस्तो नभएकै हो ।
कारण के होला ?, हमाल भन्छन्, –‘नेपाली चलचत्रिको ईतिहासमा मैले के गरे, कति गरे भन्दा पनि कस्ले वढि क्रियाशिलता देखायो, कस्ले वढि योगदान दियो भन्नेमा चिन्तीत हुनुपर्छ ।’ अरुका कुरा काट्ने पक्षमा महानायक हमाल पटक्कै छैनन् । फिल्म हो, कहिले को चर्चित हुन्छ, कहिले को थाहा हुदैन, हमालले प्रष्ट्याए । लामो समयअघि पुर्वमा भएको एक चलचित्रको छायाँकनमा जादाको सम्झना गर्छन् हमाल, –‘सुटिङ गर्ने भनेर गएका हामी गाउलेहरुको भिडले चलचित्रको छायाँकन त्यसदिनलाई सारीएको थियो ।’ आफ्ना फ्यानहरुको भिड भएपछि सुटिङ सार्नुपरेको त्यस वेला र यस वेला पनि त्यस्तो फरक देख्दैनन हमाल । तर समग्र नेपाली चलचत्रिमा कलाकारहरुको क्रेज भने घट्दो रहेको हमाललाई महसुस भएको छ ।
हमाल विमानको सेफ ल्याण्डीङ कसरी ?
राजेश हमालसँग धेरै पटक अन्र्तवार्ता लिने अवसर मिल्यो । राजधानि वाहिरवाट मनोरन्जन पत्रकारीता गरेपनि हमालसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क रहिरह्यो । निरन्तरको भेटघाट र सम्पर्कले हमालका केही भित्री पत्रहरुपनि जान्न सकियो । केही अन्र्तवार्तामा महानायक हमालले भन्ने गरेका छन्,–‘राजेश हमाल वुढो हैन वल्ल युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको छ ।’
आफुले सक्ने अवस्थासम्म चलचित्र निरन्तर खेल्ने वताउने महानायक हमाल चलचित्रमा मात्रै हैन विदेश भ्रमणमा पनि निकै सक्रिय छन् । आजभोली महानायक हमालले कसरी जिवनलाई अगाडी वढाईरहेका छन् र अवको वाटो कसरी वढाउने सोचमा होलान त्यो उनले केही मोटामोटी खाका तयार गरेका होलान, तर अव हमाल विमान सेफ ल्याडिङको पक्षमा समेत सोच्न जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागी वागमति चलचित्र हिट भयो भने तुरुन्त सेफ ल्याडिङका विषयमा सोच्नुपर्छ, यदि वागमतिले सोचेजस्तो सफलता दिएन भने पुनः अर्को हिट चलचित्र दिएर मात्रै नायकको यात्रावाट अरु कुनै क्षेत्रमा जान मिल्नेछ । तर उनले सेफल्याण्डिङको कुरा गरिसकेका छैनन ।
नायक भएर अभिनय गरिरहने, अव हिट चलचित्र दिन नसक्नेहो भने महानायक हमालको क्रेज अझ घट्ने, उनीप्रति नराम्रो सन्देश जान सक्ने, हमाल लोकप्रियता घट्दै जान सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले आएका केही नयाँ कलाकारहरुले हिट चलचित्रहरु दिईरहेका वेला महानायक हमालले पुरानै शैलीका चलचित्र दिने र उहि पुरानै स्टायलमा अभिनय गरि उहि पुरानै लोकप्रियता कमाउन खोजे उनको यात्रा अफ्ट्यारो पर्न सक्नेछ ।
हमालले यि नायकहरुले भन्दा थप वढि चर्चित र लोकप्रिय चलचित्र दिनु वाध्यता छ । यदि भने जस्तै हुदै भएन भने अहिलेसम्म वच्दै आएको स्टारडम त खत्तम होलानी ?, महानायक हमालले भने, –‘सधै मैले मात्रै चलचित्रमा अभिनय गर्नुपर्छ भन्ने हैन, मैले जसरी पनि लोकप्रिय र राम्रा चलचित्र दिनपुर्छ भन्ने दवाव हैन, सक्दो गर्नेहो कहिले राम्रो हुन्छ कहिले राम्रो नहुन सक्छ ।’
नायक हमालको सेफ ल्याण्डिङका लागी विकल्पहरु, जस्तै उनले भनेजस्तो निर्देशन क्षेत्र, राजनिती क्षेत्र, समाजीक क्षेत्र हुन सक्छन् । तर एउटा नाम कमाईसकेको र महानायकको उपाधी पाईसकेको मान्छे राजनितीक क्षेत्रमा हात हालेर पुन विवादमा आउनु ठिक नहोला । निर्देशन क्षेत्र अथवा विना राजनिती समाजसेवा सहि ल्याण्डीङका आधारहरु हुन सक्लान् ।
पाल्पामा जन्मीएका हमाललाई अवको १० वर्षपछि कहाँ देख्न सकिएला ? त्यो अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यतिवेला नचिन्नेका लागि राजेश हमाल नेपाली फिल्म अभिनयका डाइनोसरजस्ता पनि लाग्ने छैनन, किनकि उनको अभिनयको क्लाउस्ट्रोफोबिक पक्ष त्यतिवेला पनि यथावत् नै कायम राख्नेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । हमाल नेपाली रजतपटमा आउँदा लामो कपाल, उचाइ र आँखाका कारण लोकप्रिय थिए ।
त्यतिवेला उनलाई टार्जन हिरो पनि भनियो । हलिउड र बलिउडबाट टार्जन हिरो जाँदै थिए त्यो वेला । पहिलो फिल्म उनका निम्ति हाडेओखरजस्तै सावित भयो । दीपक रायमाझी निर्देशित युगदेखि युगसम्म धेरै हदसम्म राजेशकै निम्ति पनि परीक्षणमुखी थियो । सिनेमा चल्यो र यसले राजेश हमाललाई टिकाउ अभिनेताका रूपमा एउटा दर्जा दियो ।
हमालले त्यसपछि अहिलेसम्म पछि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । ‘युगदेखी युगसम्म, अधिकार, गोपीकृष्ण, भाउजु, वाट यात्रा शुरु भएको महानायकको यात्रामा देउता, चट्याङ, अपराध, सडक, पृथ्वी, परिभाषा, सिमाना, वन्धन, जुन तारा, शंकर, चोर, राना भोमी, मिस्टर रामकिष्णे, माटो वोल्छ, वशन्ती, चाँदनी, कान्छा, ढुकढुकी, सहिद गेट, धनसम्पत्ती, युद्ध, द युग देखी युग सम्म, राजु राजा राम, जय शिव संकर, धर्मा, हातमा लाग्यो शुन्य, वाटोमुनीको फुल, छविलाल कन्जुस छैन, देउकी, कसम, जिवनसंघर्ष, छोरी वुहारी, जुन तारा, परदेशी कान्छा, ढुकढुकी, मायाँको साईनो, शन्यास, धनसम्पत्ती, वाटुली, निशाना, मेरो राजेश दाई, पल्टन, मायाज वार लगायतका दर्जनौ चलचत्रिहरुमा अभिनय गरिसकेका छन् । अहिलेकोे ‘वागमति’ रिलीजमा आउन थालेको ताजा चलचत्रि हो ।
२०४६ सालमा छायाँकन सकाएर ०४७ सालमा अल नेपाल रिलीज भएको ‘युग देखी युग सम्म’ वाट हमालको ठुलो पर्दाको यात्रा आरम्भ भएको हो । सो चलचत्रिमा उनको कपाल र एउटै डाईलग सधै चर्चामा रहदै आयो । यदाकदा चलचत्रिमा वाहेक महानायक हमालले कपाल छोटो वनाउन मानेनन् ।
कपालकै प्रसगं महानायक हमाललाई खोलीयो, मुँस्कुराउदै जवाफ दिए उनले –‘मेरा दर्शकहरु दुई थरिका देखिए, एकथरिले खै तपाईको परिचय कपाल किन काट्या भन्ने गरे, कतिले सधै उहि कपाल नयाँ पनि हुनुपर्छ भने ।’ धेरैले कपाललाई महानायकको परिचय पनि भनेकाले हरेक जसो चलचित्रमा त्यो कपाल नकाटेको पुन दोहो¥याए उनले । २ सय ७५ को हाराहारीका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका राजेश हमालका अनुसार नेपाली दर्शकहरु विस्तारै चेन्ज हुदै गएका छन् । चेन्ज हुदै गएको परिस्थितीसँग दर्शक पनि सोही किसीमले चेन्जीङ भैरहेको हमालको वुझाई छ ।
हमालको अवको यात्रा कसरी अघि वढ्ला भनेर हामीले प्रश्न गरियो । सहज तर अलिकति चिन्तीत हुदै हमालले भने, –‘नायक भएर पनि काम गर्छु, चलचित्र निर्देशनतिर पनि अव चाडै जानुपर्छ भन्ने सोच पलाएको छ ।’ भविष्यका वारेमा उनले धेरै वोल्न मानेनन् ।
हमाल नभैदिएको भए…?
यद्यपी प्रदर्शनका हिसाबले ‘युग देखी युगसम्म’ हमालको पहिलो फिल्म थियो, तर अभिनय वा अनुबन्धका हिसाबले होइन, उनको पहिलो फिल्म भाग्य रेखा थियो । भाग्यरेखाका निम्ति पनि उनले धेरै दुःख र दर्द भोग्नुरेको थियो । यस फिल्मको मुहूर्तमा नायिकाका रूपमा करिश्मा केसी अनुबन्धित भएकी थिइन्, करिश्माले त्यो वेला नयाँ नायकसँग हो भने १० हजार बढी चाहिन्छ भनेर त्यो फिल्म रिजेक्ट गरेकी थिइन् ।
फिल्मको मुहूर्तमा वेला प्रमुख अतिथिका रूपमा त्यतिवेलाका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय तोकिएको समयभन्दा आधा घन्टाअगाडि होटल ब्लुस्टारको दैलोमा आइपुगेका थिए, तर नयाँ नायक एक घन्टा ढिलो आएकाले मुहूर्त पनि ढिलै सुरु भयो । राजेशका निम्ति यो ढिलो सुरु भएको मुहूर्त अफाप भयो, यस फिल्मबाट पहिली नायिका करिश्मा निस्किइन्, त्यसपछि अर्की नायिका कृष्टि के.सी त्यसपछि नायक राजेश हमाल । भाग्य रेखा सबैका निम्ति अफापसिद्ध भयो, तर राजेशका निम्ति यो पनि फलिफाप नै भयो, उनी सदैव यसैकारण पनि चर्चामानै रहदै आए । कुनै फिल्मबाट यसरी नायक निकालिँदा स्कुप मारेको यो पहिलो घटना थियो । राजेश यसर्थमा नेपाली सिने बजारका निम्ति पहिलो स्कुप भए । राजेश हमालले युगदेखि युगसम्मको सफलतापछि प्रकाश थापाको ‘अधिकार’ मा अभिनय गरे ।
जुन चलचित्रमा उनको निर्देशकसितको अनवनका कारण धेरै विवाद र मतभेद कायमै रह्यो । अधिकार न प्रकाश थापाको शैलीको फिल्म भयो, न राजेश हमाल शैलीको । अधिकारपछि देवता, पृथ्वी, कसम, भीष्म प्रतिज्ञा लगायतमा अभिनय गरसँगै राजेश हमालको अभिनयको लय, संवादको पन अनि गेटअपमा एक किसिमको आलोचना अनि चर्चापरिचर्चा हुन थाल्यो । ति घटनाहरु पत्रीका, टेलिभीजन र रेडियोहरुमा चल्ने मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरुमा एक खालको मसला वन्न थाल्यो । पृथ्वी सिनेमाको ‘साथीका लागि यो हात सलाम हो, दुस्मनका लागि यो हात फलाम हो’ संवाद राजेशको फिल्मी करीअरमा सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद वन्न सफल भयो । आफ्नो लगभग पच्चीस वर्षे फिल्मी करिअरमा उनले यो संवाद सबभन्दा धेरै बोले फिल्मबाहिर र भित्र पनि ।
राजेश हमाल नेपालको फिल्मी ढोकावाट भित्र छिर्दा तीनजना हिरोको जाज्वल्यमान युग थियो । शिव श्रेष्ठ, भुवन के.सी र अर्जुनजंग शाहीको । पछि यी तीनैको सामूहिकताको साम्यपन राजेशमा देखियो । बाँकी तीनजना अतिरिक्तजस्ता हुँदै गए । हमाल आएसँगै उनिहरुको तातोपन सेलाउदै गयो । भुवन केसी अझै पनि चलचित्रहरुमा फ्याट्टफुट्ट देखिदै आएका छन्, केही चलचित्रहरु वनाउदै पनि आएका छन् । तर अनुशासनको धेरै कमी भएको नेपाली फिल्म उद्योगमा राजेशले समय र पंक्चुयालिटीको नयाँ नमुना बनाए, समयमा सिनेमा बन्ने र प्रदर्शन हुने । फिल्म उद्योगमा राजेशलाई हेरेर सिनेमा लेखिने र बनाउने परम्परा सुरु भयो । चलचित्र पनि गज्जवका वन्ने रहेछन्, चलचित्रवाट कमाई पनि हुदोरहेछ, चलचित्र क्षेत्र पनि व्यवसायीक रुपमा अघि वढ्दोरहेछ है भन्ने एक खालको हुटहुटि नेपाली चलचित्र वजारमा भित्रीन पुग्यो ।
उनलाई हेरेरै नयाँ शैलीका नायक पनि आउन थाले । नृत्यमा कमजोर मानिने राजेशका निम्ति नृत्य निर्देशकले आफ्नो स्टेप नै बदल्न थाले । राजेशको आँखामा खराबी छ भन्ने क्यामेराम्यानको लेन्स नै बिस्तारै बन्द हुँदै गयो । राजेश हमाल नायकका रूपमा सफल भएको समयमा सबभन्दा धेरै फिल्म पत्रकार र सबैभन्दा धेरै फिल्मी पत्रिका बजारमा देखिए । यो एउटा सुखद् समाचार हो, राजेश हमालको विवादको कुरा पनि हटकेकका रूपमा बिक्ने नेपाली फिल्म उद्योगमा पूर्ववर्ती नायक भुवन र अर्जुन बिस्तारै सेलाउँदै गए भने अर्जुनका चलचित्र ४६ सालपछि प्रतिबन्धितजस्तो भएपछि राजेशका निम्ति नयाँ बाटो खुल्यो । अरूले बनाएको बाटोमा राजेश हमालले आफ्नो बाटोलाई मूल बाटो बनाएर अघिल्लो बाटोलाई फुटपाथ जस्तै बनाउन सके ।
महानायक हमाल ०५३ सम्म जे जति पारिश्रमिक लिएपनि ५३ को पहिलो महिनादेखी एक लाखका नायक वने । यसअघि कुनै नायक वा नायिकाले यति रकम माग्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । एक अंकका पछाडि पाँचवटा शून्य थप्न सक्ने उनी पहिलो नायक हुनुका पछाडि उनको धेरै मिहिनेत, परिश्रम भन्दा उनको इमानदारी र अनुशासनको स्वरूप देखिन्थ्यो ।
पुरातन शैलीको ढर्रामा चलिरहेको नेपाली सिनेमा उद्योगमा राजेशले निर्देशकको मनोमानीलाई एक किसिमको बिराम जस्तै दिए । नयाँ केही गर्न नसके पनि नयाँ गर्ने सोचमा उनले नयाँ–नयाँ निर्देशक र नयाँ–नयाँ कथा, पटकथा खोजिरहे । तर, उनले राजेश हमाल हुनुको पहिचानमा पुलिस र चोरको फरक–फरक भूमिका गर्दा पनि भेष बदल्नुबाहेक आफ्नो कपालमा कैचीसम्म नचलाएर पनि काम चलाए । राजेश हमालसँगै फिल्म उद्योगमा सुरु भएको नयाँ शब्द थियो, प्रोफेसनालिज्म । प्रोफेसनालिज्मको अर्थ, शब्दकोशमा जे भए पनि राजेशले यसलाई परिपक्वता र व्यावसायिकताको समिश्रणमा जोड दिए, यो उनको धरातलीय पक्ष थियो । नेपाली चलचित्रका निर्माता अब दुःख–दर्द र आँसुको कथा बोकेर होइन, हातमा नोटको गड्डी बोकेर सही समयमा सही–सही ठाउँमा उभिन थाले । हस्ताक्षर र एग्रिमेन्ट गरेर नायकलाई आफ्नो वनाउन लागिपरे ।
निश्चय नै राजेश हमालले अभिनय सुरु गर्दा नेपाली फिल्म उद्योग अहिलेको जस्तै आइसवर्ग नै थियो, पानीमाथि आधा, पानीभित्र आधा । तर, त्यो आधा अंशमा पनि पूरा देख्ने क्षमताका कारण राजेशले आफूलाई पहिलो सुपर स्टार भनाउने मौका पाए । बलिउडका पहिलो सुपर स्टार राजेश खन्ना पर्दामा छाइरहेका वेला जन्मेका हमालले कहिले पनि अभिनयका निम्ति मार्लन ब्रान्डो वा दिलीपकुमार शैलीका मेथड एक्टिङ गर्नुपरेन । वा, अभिनयका निम्ति उनले कहिले पारमा नसिरुद्दिन शाहले जस्तो वजन घटाउनु वा गान्धीमा बेन किंग्स्लेले जस्तो मोटापा लुकाउनुपरेन । नेपाली मिडिया र पत्रकारले राजेश हमालले हेयर स्टाइल मात्र बदल्दा पनि समाचार बनाएकै छन् ।
भारतको पहिलो सुपर स्टार राजेश खन्नाले जस्तै आफूलाई महानायक भनेको सुन्न पाउने उनी पहिलो नायक हुन, नेपाली रजतपटका । महाचोर नामको फिल्ममा अभिनय गरेपछि खन्नालाई महानायक होइन, महाबोर नायकको उपाधि दिइएको थियो, तर त्यस्तो दुर्भाग्य अझै हमालले भोग्नुपरेको छैन, यो नेपाली दर्शकको सदाशयता पनि हो । राजेश हमाल नभइदिएको भए नेपाली चलचित्रमा यी कतिपय कुरा अवश्य हुने थिएनन, स्टार भ्यालु, डेट सिस्टम अनि नेपालमा नभएको चलन पिए सिस्टम ।
त्यही अनुसासन अहिले पनि कायमै भएकाले राजेश हमालको स्टारडम सधै उस्तै हुने गरेको हो भन्छन् उनी । ‘पहिलो कुरा चरित्रको कुरा हो, म आफ्नो स्टारडम र ईज्ययतलाई उहि स्थानमा राख्न सधै अनुशासन जस्तो गाह्रो विषयलाई फलो गर्दै आए, महानायकका सवै राज यहि अनुशासनवाट भएका हुन, हाँस्दै हमालले भने ।
समय र स्वास्थ्यका निम्ति सदैव सतर्क रहने हमाल नेपाली चलचित्र उद्योगमा पिए राख्ने पहिलो नायक थिए र उनको यो परम्परा अरूले पनि पछ्याए । राजेशका कारण नयाँ–नयाँ निर्देशक मात्र होइन, नयाँ–नयाँ लेखक पनि उत्साहित र पुरस्कृत भएका छन् । उनले सिनेमाबाट कमाएको ख्याति कुनै पुस्तक विमोचनमा गएर खन्याइदिँदा नयाँ पुस्ताका उपन्यासकार, कविहरूले जीविकाको नयाँ बाटो बनाउन पाएका छन् । राजेश हमाल उभिएर चलेका कतिपय सिनेमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, त्यसमा राजेश हमालले निर्देशकले भनेको भन्दा र लेखकले लेखेको भन्दा उँचो स्वरमा बोलेका हुन्छन, राजेश हमालको अभिनय नआएको भए यति लाउड बोल्ने वा लाउड सुनिने संवाद पनि सायद लेखिने थिएन ।
र, लेख्ने थिएनन, पत्रकार, सुन्ने र हेर्ने थिएनन दर्शक श्रोता । अनि भन्नैपर्छ यहाँनिर, सलाम हमाल ! जय राजेश हमाल !!
–यो स्टोरी यसअघि बुटवलको दैनिक पत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।